EyeKhala 12, 2018 admin
Abra yenza visa kunye MasterCard iinketho ukuthenga Bitcoin
Crypto wallet app Abra umemezele ukuba abasebenzisi ngoku ukuthenga Bitcoin kunye MVUME LOKUNDWENDWELA LEXESHANA okanye Mastercard.
Kude kube ngoku abasebenzisi bakwazi ukuthenga Bitcoin usebenzisa iindlela ezifana transfer wire okanye ngokuthumela ezinye cryptocurrency kuphela.
Binance imali ukwakha yebhanki yokuqala eyaba kwihlabathi e Malta
Binance efuna ukubeka isiseko ebhankini entsha abanikazi bazo baya kuba abatyali crypto.
Le nkampani ithe crypto-friendly kwisiqithi saseMalta iya kuba ikhaya elizayo Founders Bank kwaye iye utyale imali 5 ekhulwini owayebethelelwe kunye nezinye abatyali ankile kwi $ 155M pre-mali yokulinganisela.
Ibhanki kufuneka ilayisensi evela nabalawuli e Malta, ilungu le-European Union kwaye ngokuxhomekeke kwimithetho yayo zemali.
le projekthi, ngokusekelwe kwiinkqubo blockchain, kuya kufuna ukuba Founders Bank ebhankini yokuqala amagunya kwaye ophethwe luluntu kwihlabathi, ngokuxhomekeka ukuba ufumana imvume eyimfuneko.
Cartier iceba ukuba ukulandelela diamonds nge blockchain
Richemont, Swiss nezinto zodidi omkhulu onelungelo Cartier, ijikayo blockchain kwi intshukumo ejoliswe ukuzisa elubala ukuze ikhonkco yonikezelo.
Jin Keyu, a ngezoqoqosho ophum uprofesa e-London School of Economics (LSE) owamiswa Richemont abe lilungu lebhodi kunyaka ophelileyo, uthe ngexesha intetho kwi isiganeko ngoLwesine ukuba ngxilimbela zodidi ujolise ukusebenzisa blockchain ukulawula zonke “Iimarike ngaxeshanye.”
“Njengoko inkampani engumzali Cartier kaThixo, kutshanje siye sagqiba ukuqala kusetyenziswa blockchain ukulandelela imvelaphi yeedayimane, rocks negolide umva emigodini okanye imizi-mveliso recycling. Ngokuba zonke imilindo thina sithengise, nathi sinethemba (sebenzisa blockchain) ukuba ukulandelela imithombo zabo ukuqinisekisa ukuba iqiniso kwazo,” uthe.
Ingxelo Daily Market Kraken for 11.07.2018
$97.2M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Faka phakathi: Russia needs to advance...
Iimpazamo ye Crypto bezimali. Er...
Monetary Freedom & Unleashing Blockchain’s Power with Galia Benartzi – video, Ethereum, sinh, Bancor
EyoMdumba 23, 2019